ကိုယ်ဘာကောင်လဲဆိုတာ ကိုယ်သိဖို.လိုတယ် သို.တည်းမဟုတ် Know Thou Self
“သီလပေးပင့်ထားလို. သွားမလို.ပါဘုရား” လို.ပြန်လျှောက်ပါသတဲ့။ ဒီအခါမှာ ဆရာတော်ဘုရားကြီးက
“သူများပေးဖို. နင့်မှာရော သီလရှိရဲ.လား” လို.မေးပြီးကြွသွားပါသတဲ့။ ဒီအခါမှာ အဲဒီဦးဇင်းလည်း ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ပြန်ဆင်ခြင်ပြီး မစင်ကြယ်တဲ့အဖြစ်ကို ကိုယ်တိုင်သိလာရတာကြောင့် လူဝတ်လဲသွားပါသတဲ့။
This entry was posted on November 30, 2014 at 6:23 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.